Pitbull Lab Mix: Waxa La Ogaado Kahor Iibsiga Labrabull - Taranka
Tababarka Eeyga, Featured
Pitbull Lab Mix: Waxa La Ogaado Kahor Iibsiga Labrabull
Isku-darka Lab Sheybaar waa Labrador Retriever iyo Pitbull hybrid .
Iskutallaabtaan ayaa soo saareysa sida ugu fiican labada eey ee la jecel yahay ah.
Labrabulls waa eeyo ciyaar badan oo degganaan doona isla goob kasta oo qoys.
Si kastaba ha noqotee, noocani sidoo kale wuxuu u baahan yahay shaqo badan shakhsiyadooduna way adkaan kartaa in la saadaaliyo.
Tani waxay noqon doontaa mid ka mid ah eeyaha ugu xiisaha badan ee aad waligaa yeelan doonto, laakiin sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu adag.
Haddii Pitbull Lab Mix uu leeyahay dareenkaaga markaa sii wad akhriska si aad u barato dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato afartaan lugta leh ...
Tusmada iyo Navigation Deg Deg ah
Pitbull Lab Isku Darka Muuqaal
Noocyo la mid ah
Guudmarka Pitbull Lab Mix
Maalin Nolosha Noocan ah
Taariikhda Iyo Asalka
Dabeecad Iyo Dabeecad
Imisa ayey Sheybaarka Dooxada Isku Darshaa?
Muuqaalka Lab Pitbull Mix
Tilmaamaha Daryeelka Daryeelka Pitbull Lab Mix
Sida Loo Tababaro Labrabull
Iskudhafka Lab Sheybaarka waa iskutallaab la jeclaan karo oo udhaxeysa American Pitbull Terrier iyo Labrador Retriever.
Isku-darkaani waxay u muuqdaan inay ka qaadaan astaamaha ugu wanaagsan waalid kasta. Marka waxaad filan kartaa balanbaalis bulsheed oo leh tamar aad u sarreysa. Waxay sameeyaan eeyo qoys oo cajiib ah waxayna u fiican yihiin qoysaska mashquulka badan iyo kuwa firfircoon ee leh waxyaabo badan oo socda.
Caannimada: # 14.
Miisaanka: 30-80 rodol.
Qiimo: $ 300- $ 700.
Shakhsiyadda: Dhaqdhaqaaq, bulsho iyo ilaalin.
Qiimo : $ 300- $ 600
Nolosha qofka : 9-12 sano
Qoyska Kuxiran : Haa
Cabir : 70-115 rodol
Daadiyay : Dhexdhexaad
Waxqabadka : Dhexdhexaad
Isku-darka Lab Shepherd Jarmal
Qiimo : $ 200- $ 600
Nolosha qofka : 10-12 sano
Cabir : 35-95 rodol
Isku-darka Lab Lab
Qiimo : $ 300- $ 700
Nolosha qofka : 10-14 sano
Cabir : 30-80 rodol
Waxqabadka : Sare
Pitbull Lab Mix waa iskutallaab inta udhaxeysa Labrador Retriever iyo Termull Terrier-ka Mareykanka.
Waxa kale oo aad u garan kartaa eeyadan inay yihiin Labrabulls ama Bulladors.
Noocani waxaa lagu sifeeyay inay yihiin kuwo isku dhafan laakiin waalidkood farcankoodu wuxuu ka tirsan yahay eyga kooxda 'Terrier' iyo kooxda isboortiga.
Badanaa waxaa loo hayaa sida eeyo wehel u ah dadka raadinaya saaxiib jecel oo firfircoon. Qeybta ugu badan waxaad ka filan kartaa cunuggaaga inuu haysto difaaca Pitbull iyo rabitaan xoog leh, iyo dabeecadda Labrador iyo dabeecadda saaxiibtinimo.
Si kastaba ha noqotee sababtoo ah Pitbull Lab Mix waa nooc isku dhafan iyaga oo aan dammaanad ka qaadi karin dabeecadooda.
Sidoo kale waxay la mid tahay muuqaalkooda maaddaama ay dhaxli karaan midabbada midabbada suuragalka ah iyo astaamaha jireed labada waalid midkoodna .
Tani guud ahaan laguma talinayo inay tahay nooc loogu talagalay dadka bilowga ah.
Isku darka Lab Pitbull waa dayactir aad u sarreeya wuxuuna u baahan yahay tababar joogto ah iyo is dhexgal bulsho.
Waxaa guud ahaan lagula taliyaa milkiilayaasha khibrada leh ee yaqaan sida loola macaamilo eeyaha tamarta sare leh.
Si wanaagsan ula dhaqan carruurta.
Ey aad u jaban.
Feejignaan iyo feejignaan laakiin aan qaylo lahayn.
Si fudud loo maareeyo marka loo eego Godka saafiga ah.
Qoys aad u jahaysan
Ma xamili karo in keligaa lagaa tago.
Qofnimadu way adkaan kartaa in la saadaaliyo.
Wuxuu noqon karaa mid wax dumiya markaad caajiso.
Isku-darka Sheybaarkaaga 'Pitbull Lab Mix' wuxuu ku nasan doonaa cagta sariirtaada habeenkii oo dhan.
Sanka oo qabow wajigaaga ama soo dhaweyn farxad leh oo guriga ku wareegsan ayaa kuu sheegi doonta inay diyaar u yihiin inay bilaabaan maalinta.
Quraacda quraacdaada waxay kaa raaci doontaa isla jikada si labadiinnu u wada cunaan. Kadib waxay kugu raaci doonaan musqusha si ay kaaga caawiyaan inaad cusbooneysiiso.
Subaxnimadii ayaaba u bilaabantay iyaga waana waqtigii socodka ama orodka. Eygaaga ayaa kuu keeni doona xadhiggooda adiga midig adiga oo ku ridaya cagahaaga.
Kadib socodkaaga subaxa kadib waxaad aadi kartaa shaqo si aad ugu baahan tahay laakiin waxaad u baahan doontaa inaad wacdo saaxiib aad ku kalsoon tahay si uu kuugu yimaado oo uu u hubiyo Labrabull-kaaga. Way necbaan doonaan in keligood loo daayo sidaa darteed hubi inay haystaan ​​dad hareerahooda ah markasta.
Intaad banaanka ka joogto Pitbull Lab Mix-kaaga ayaa waqtiga ku dhaafi doona adigoo la ciyaaraya eygooda oo kormeeraya guriga si loo hubiyo inaysan waxba ka jirin noocyada.
Marka aad shaqada ka timaado waa inaad waqti badan la qaadataa eeygaaga intii suurtagal ah.
Safarka jardiinadu waa hab fiican oo labadiinaba aad ugu nastaan ​​galabtii.
Tani waxay soo deyn doontaa wax kasta oo awood ah oo ardaygaaga laga yaabo inuu keydsanayay maalinta oo dhan.
Ka dib galab dheer oo orod iyo ciyaaro ardaygaaga ayaa gabi ahaanba daali doona. Hadda waxaa la joogaa xilligii cashada ka dibna waa waqtigii la degi lahaa oo la nasan lahaa.
Labrabull ma seexdo illaa milkiilahooda uu seexdo. Markaad sariirta ku gurguurto habeenka way ag joogi doonaan.
Taariikhda Pitbull Lab Mix waa wax yar oo qarsoodi ah.
Waxaa guud ahaan la isku raacsan yahay in eeygan markii ugu horreysay la cunay dhammaadkii 1990-meeyadii xilligii eeyaha naqshadeeye.
In si ulakac ah loo soo wada saaray ama si shil ah lama garanayo.
Si kastaba ha noqotee inta badan isku darka Pitbull ayaa si ula kac ah loo kariyaa si xitaa looga baxo dabeecadda Pitbull.
Maalmahan isku dhafan ayaa si ula kac ah loo soo saaray iyada oo Pitbull Lab Mixs ay si dhakhso leh ugu sii kordhayaan caan.
Iyadoo aan loo eegin taariikhdooda waxaan waxbadan ka ogaanaa taariikhda waalidkood.
Taariikhda nasiib darrada ah ee loo yaqaan 'Pitbull Terrier' ee Mareykanka ayaa bilaabmaysa dibi ku jira fagaaraha. 1500s eeyaha ayaa loo isticmaali jiray inay la dagaallamaan dibiyada taasna runtii waxay ahayd madadaalo caan ah.
Kaliya eeyaha ugu dagaalka badan wuu guuleysan lahaa sidaa darteed eeyaha waxaa loo marsiiyay habab tababar oo arxan darro ah waxaana loo soo saaray astaamaha ugu dagaal badan. Markii la joojiyey baaylihi dibi eeyahaas waxaa lakala hor yimid giraanta la dagaalanka eeyga. Sumcadda Pitbull ee dagaal yahanka xun wuxuu ku noolaa muddo dheer ka dib markii la dagaallanka eyga la mamnuucay.
Si kastaba ha noqotee dadka jecel caanaha ayaa wali isku dayaya inay kor u qaadaan wacyiga dabeecadda runta ah ee eygan oo ah saaxiib daacad ah oo la jecel yahay. Waxaa badanaa loogu yeeraa eeyaha yar yar sababtoo ah jacaylka carruurta.
Taariikhda Labrador Retriever waa mid aad ufudud badan.
Eeyadan shaqeeya ayaa loogu magac daray gobolka Labrador-Newfoundland oo markii ugu horreysay lagu cunay.
Waxaa loo soo saaray inay noqdaan saaxiibka ugaarsiga ugu fiican. Eeyahaani waxay si xamaasad leh u soo doonan jireen oo ay soo ceshan jireen shimbiraha ugaadha ah ee la soo dajiyay, xitaa waxay ku boodayeen biyaha si ay dib ugu soo celiyaan duck ama goose.
Qarnigii 19-aad tarankaani wuxuu sheegay inuu kasbado meel ka baxsan Kanada.
Noocani wuxuu helay aqoonsi United Kennel Club sanadkii 1903 iyo Aqoonsigii Naadiga Kennelka ee Maraykanka sanadkii 1917. Maanta iyaga ayaa weli ah tirada koowaad ee eyda qoysaska ugu caansan Ameerika.
5 Xaqiiqooyin Xiiso Leh
Isku darka 'Labit Pull Lab Lab' maahan nooc caan ah oo caan ah laakiin waalidkood xaqiiqdii waa. Labrador Retriever weli waa lambarka koowaad ee eyda ugu caansan Mareykanka.
Sababtoo ah Labradors si wanaagsan ayaa loo jecel yahay waxay ka mid yihiin noocyada ugu caansan ee waalidnimada isku dhafka. Isku-darka Lab Rottweiler iyo Jarmalka Shepherd Lab Mix waxay aad ugu egyihiin Isku-darka Lab-da Pitbull.
Noocani wuxuu sameeyaa ilaaliye cajiib ah laakiin xulasho aad u liidata eeyga ilaaliyaha ah. Waxay yihiin kuwo saaxiibtinimo leh waxayna u badan tahay inay isku dayaan inay dhunkadaan kuwa ku soo xadgudbay halkii ay ka nixin lahaayeen midkood.
Nasiib darrose noocani wuu ku xanuunsan karaa isla sharci aan cadaalad ahayn waalidkood ahaan. Pitbulls iyo Pitbull Mixes waa laga mamnuucay degmooyinka qaarkood sababo la xiriira sumcadda Pitbull ee aan u qalmin eeyga halista ah.
Labrabulls waxay sameeyaan eey adeeg cajiib ah maaddaama labadoodaba waalidkood yihiin xulashooyinka ey ee adeegga u habboon.
Pitbull Lab Mix waa labadaba shaqaale adag iyo goofball la jecel yahay isla waqtigaas.
Waxay noqon doonaan eey aad u madadaalo badan oo ay leeyihiin.
Isku darkaagu wuxuu noqon doonaa mid aad u ciyaar badan wuxuuna u janjeeraa inuu u ekaado sida eey weyn oo dhan noloshooda oo dhan. Tani waa eey aad u tamar badan oo dalbanaya milkiile firfircoon.
Qof kasta oo raba inuu korsado eeygan waa inuu si buuxda ugu heellan yahay kicinta jirka iyo maskaxda ee ay u baahan doonaan maalinta oo dhan.
Eeyaha yaryar waxay noqon doonaan kuwa buuq badan ilaa inta laga tababarayo inaysan ciyin.
Sida ugu wanaagsan ee tan lagu sameyn karo ayaa ah in la iska indha tiro eeyo yaryaya oo ciyaya inta laga ansixin lahaa marka ay markooda qaylinayaan.
Markaad tababarto eygaagu wuxuu ciyi doonaa oo keliya markay faraxsan yihiin ama ay argagaxsan yihiin. Kuwani dhicin bulsheed ee dhogorta leh waxay rabaan inay ogaadaan qof walba. Kaliya waxay eegaan inay la kulmaan dad cusub waana in si joogto ah loola dhaqmaa inta ay nool yihiin oo dhan.
Tani waa nooca eeyga u maleeya in qof walba uu yahay saaxiibkooda ugu fiican wuxuuna si xamaasad leh u salaami doonaa deriskaaga.
Waxay la jaan qaadaan aadanaha oo dhan laakiin tamartooda sare waxay ka dhigan tahay inay ku habboon yihiin carruurta ka weyn 10 sano.
Pitbull Lab Mix wuxuu noqon doonaa mid aad u burburin ah markii ay si liidata u dhex-gasho bulshada ama la kiciyo . Garaacista alaabta guriga, jeexjeexida daaqada iyo xoqida gidaarada ayaa ah dhamaan dabeecadaha ay tahay in laga feejignaado.
Akhlaaqda xun waxaa looga hortagi karaa adoo hubinaya inaad buuxiso dalabyadan badan eey markasta. Ka fogow inaad siiso eygaaga nooc kasta oo ah fiiro gaar ah (mid togan ama mid taban) markay si xun u dhaqmayaan.
Dhaqankan dartiis waxaad u baahan doontaa inaad heshid eey fadhiista intaad maqan tahay - xitaa haddii ay tahay dhowr saacadood oo keliya markaad shaqada ku maqantahay.
Haddii aad aadeyso fasax markaa saqafkaagu wuu ku qanacsan yahay haddii aad horay u qaadato.
Guud ahaan eeygan way adkaan kartaa in la maareeyo laakiin daacadnimadooda iyo jacaylka ay kuu qabaan ayaa garan doona soohdin. Runtii waxaad tahay eeyga saaxiibkiisa ugu fiican waxayna dareemi doonaan dareen adag oo adiga iyo reerkaagaba ah.
Waa inaad ka fileysaa inaad bixiso $ 300 ilaa $ 700 oo loo yaqaan 'Pitbull Lab Mix puppy'.
Nasiib darrose maxaa yeelay Eydan yar yar ayaa mararka qaarkood aad ugu badan qoysaska qaarkood inay maareeyaan waxay ku dambeeyaan hoy.
Hoyga ayaa leh qaasatan qaali isku darka Pitbull noocyadiisa kala duwan.
Hoyga caadiga ah waxay kaa qaadi doonaan qiyaastii $ 150- $ 250 oo ah khidmada korsashada.
Ey $ 300- $ 700
Dadka waaweyn $ 200- $ 500
Korsasho $ 150- $ 350
Talooyinka Iibiyaha Labrabull
Eyga Labrabull caadi ahaan qiimihiisu waa $ 300- $ 700 oo keliya.
In kasta oo ay raqiis ku noqon karaan iibsashada quudinta eeygan tamarta badan waa mid aad qaali u ah. Sida ugu wanaagsan ee loo maareeyo kharashka cuntada waa inaad iibsato hal rodol oo kiish ah oo cunto ah qiyaastii $ 55- $ 65. Tani waa inay socotaa ugu yaraan 2-3 bilood ka hor intaan loo baahnayn in la beddelo.
Dhammaan iskudhafka Pit waxay u baahan yihiin tababar xoog leh iyo koorsooyin badan oo tababar ah ayaa lacag badan ka qaadi doona si ay u tababaraan Pitbull.
Haddii aadan haysan saaxiib kuu soo gali kara oo ka fiirin kara saxaradaada intaad banaanka joogto markaa waxaad u baahan doontaa inaad maal gashato kursi ey - kuwa fadhiya waxay kaa qaadi doonaan $ 10- $ 15 saacaddii.
Iskudhafka Pitbull Lab Mix wuxuu ubaahan yahay alaab badan oo bannaanka lagu ciyaaro oo istaagi kara dhar badan iyo jeexitaan. Waa inaad iska ilaalisaa alaabada lagu ciyaaro ee ka jaban maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa inaad xitaa ka sii bixiso beddelka joogtada ah.
Haddii aad dooratid inaad ka badbaadiso Labrabull hoyga markaa ma jiraan wax damaanad ah oo ku saabsan nasashada ardayga. Way mudan tahay in laga qaato samatabbixin ku takhasustay noocyada waalidka xitaa haddii ay la macno tahay bixinta $ 100 in ka badan lacagta korsashada caadiga ah.
Sababtoo ah eeygan waa isku dar way adkaan kartaa in la saadaaliyo siday u ekaan doonaan.
Isku darka Lab Sheybaar ayaa laga yaabaa inuu dhaxlo jaakada kaliya ee Pitbull ama labiska labba ah ee Labrador.
Sidoo kale maadaama ay yihiin kuwo isku dhex jira ma jiraan heerar rasmi ah oo noocoodu yahay.
Waa inaad fiirisaa eey dhexdhexaad ah oo muruq leh oo leh lugaha socod dheer.
Dhegahoodu badanaa way wareegsan yihiin oo way jilicsan yihiin laakiin mararka qaarkood way istaagi karaan iyagoo kacsan haddii ay qaataan ka dib waalidkood Godka. Isku-darka badankood waxay leeyihiin shaybaarka 'otter tailter' astaamaha.
Maaddaama labada nooc ee waalidku ay yihiin cabbirro kala duwan, dhererka iyo culeyska kala duwan ee isku dhafkan ayaa si weyn u kala duwanaan kara.
Ragga qaangaarka ah waxay istaagaan inta u dhexeysa 18-24 inji oo miisaankoodu wuxuu u dhexeeyaa 35-80 rodol.
Dumarku waxay istaagaan inta udhaxeysa 17-23 inji oo miisaankeedu waa 30-70 rodol.
Isku darkaani wuxuu noqon karaa midab adag ama waxay yeelan karaan midab madow maaskaro ka soo horjeedka asalka cad.
Waxay noqon karaan mid ka mid ah midabada aasaasiga ah ee Labrador (madow, jaalle iyo shukulaato) ama mid ka mid ah midabbada 'Pitbull' (cawl, brindle ama casaan).
Sidoo kale sida Pitbull, sankooda ayaa la jaan qaadi kara midabka dhogortiisa. Haddii waalidkood casaan lahaa ama sanka buluuga ah , tani waxay ku soo muuqan kartaa eey.
Waxay dhaxli karaan shaybaarka cimilada labka ah ee u adkaysta cimilada ama jaakada kaliya ee loo yaqaan 'Pitbull's dhow jare'.
Isku darkaaga ayaa xoogaa daadin doona haddii ay leeyihiin jaakad laba jibbaar ah laakiin eeyaha hal dahaarka leh ayaa ka yar daadiya.
Koodhadhka keligood ayaa la gooyaa oo aad ugu dhow jirka halka jaakad laba jibbaaran waa cufan yahay oo qalafsan yahay.
Haddii eeygaagu leeyahay jaakad laba jibbaaran markaa waa in la cadayado ugu yaraan laba jeer usbuucii. Iska ilaali inaad u qaadatid eeygaaga xiiro ama timo jareyn maadaama ay taasi dhaawici karto jaakadooda.
Isku darka 'Labit Lab' Lab waa hawl aad u adag in la qaato.
Iyagu maahan xulashada ugu fiican eeyga ugu horreeya waana hubaal inaysan ahayn qof kasta oo raadinaya nooc fudud oo la ilaaliyo.
Tababbarka iyo is dhexgalka bulshada ayaa ah ballanqaad nolosha oo dhan ah waxaadna u baahan doontaa inaad saacado ku qaadatid jimicsi iyo maskax ahaanba dhiirrigelin maalin kasta. Eygan dabiici ahaan waa saaxiibtinimo laakiin haddii loo oggolaado inay duurka ku ordaan waxay isu rogi karaan riyo cadho leh.
Haddii aad u heellan tahay shaqada iyo tamarta eeygan u baahan yahay markaa waxaa lagugu abaalmarin doonaa saaxiib daacad ah.
Labrabull wuxuu u baahan doonaa ugu yaraan 90 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii.
Marka waa inaad u diyaar garowdaa inaad cagahaaga la dhigato lammaanahaaga tababarka cusub ee cusub ilaa 2 saacadood maalintii.
Eygan waa in loo soo bixiyaa labada socod iyo socodba (waa sii fiicnaanayaa). Socod ama orod waa inay socotaa meel kasta 30 daqiiqo ilaa saacad.
Eygan ku hay xadhigiisa markasta oo hubi inay ku dhow yihiin dhinacaaga.
Isku darka 'Labit Lab' Lab waa sayid madadaalo iyo ciyaar sidaa darteed iyagu ma fadhiisan doonaan si caajis ah mana calali doonaan a toy maanta oo dhan.
Tani waa cayaaraha dabiiciga ah ee awood u leh dhammaan noocyada kaladuwan.
Fogaanta fogaanta, boodka sare iyo dabaasha dhammaantood waa cayaaraha ay jecel yihiin. Dabcan Lab Pit Mix wuxuu sidoo kale jecel yahay ciyaar la soo qaado sidoo kale.
Wadarta Waxqabadka Maalinlaha: 120 daqiiqo.
Heerka Waxqabadka: 5/5.
Waxqabadka ugu xiisaha badan: Keen
Labrabull-kaaga ayaa daadin doona xoogaa yar (gaar ahaan haddii ay ka dhaxlaan Labrador's double coat).
Koodh keliya waa in la caddeeyaa toddobaadkii hal mar, halka jaakad laba jibbaaran la caddeeyo ilaa 3 jeer toddobaadkii. Waa inaad isticmaashaa currycomb bir ah oo gaara labada lakab ee jaakadooda. Ka dhig dhagaha eeygaaga kuwo nadiif ah oo qalalan (gaar ahaan haddii dhagahoodu ay jilicsan yihiin). Kaliya maydh qashinkaaga markii ay gebi ahaanba lama huraan tahay.
Uma baahnid inaad jartid cidiyaha eeyaha ciddiyaha marar badan maadaama ay xiranayaan inta ay ordaan oo ay ciyaaraan.
Caday ilkaha eygaaga ugu yaraan hal mar usbuucii si aad uga ilaaliso cudurka ciridka. Eeyaha aan jecleyn cadayga waxaa laga yaabaa inay ku dhiirigeliyaan daawada cadayga ee dhadhanka fiican leh.
Weligaa ma arki doontid eey cunaya sida ugu badan ee loo yaqaan 'Pitbull Lab Mix'.
Qashin-weyntan ballaaran ee firfircoon waxay u baahan tahay qiyaastii 1600 kaloori maalintii si ay uga dheregto.
Waa inaad u kala qaybisaa 4-kan koob ee kibble laba cunto.
Cuntadooda ugu weyn waa in la siiyaa wax yar uun ka hor saacadaha ugu firfircoon.
Nafaqada eygaagu waa inay noqotaa inta badan borotiinka, oo leh qadar yar oo dufan ah iyo karbooyin laga helo ilaha dabiiciga. Noocani wuxuu kaloo sifiican ugu shaqeeyaa cuntada cunnada ceeriin.
Ku darso cuntada eygaaga miro iyo khudaarta fiitamiin dheeri ah. Ukunta la kariyey iyo baradhada macaan waxay sameeysaa daaweyn nafaqo leh.
Ardaygaagu wuxuu heli doonaa 2-4 rodol 4tii toddobaad ee koritaan eey ah. Inta lagu jiro 12-ka toddobaad ee ugu horeeya ilmahaaga wuxuu gaari doonaa 6-12 rodol.
Waxay culeyskooda badnaan doonaan inta udhaxeysa 6 bilood ilaa 1 sano. Tani waa goorta ay xirayaan kala bar culeyskooda qaangaarka.
Culeyska eygaaga oo buuxa oo dhan 30-80 rodol ayaa la gaari doonaa inta udhaxeysa dhalashadooda 1aad iyo 2aad.
Rabitaanka weyn eeygan ayaa ka fiicnaan kara iyaga.
Pitbull Lab Mixs ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo calool xanuun taas oo ah xaalad calool xanuun leh oo badanaa keenta cunida ama cabitaanka si dhakhso leh.
Calaamadaha waxaa ka mid ah matag iyo hoos u dhac iyo calool xanuun muuqda oo bararsan.
Bloat waa in had iyo jeer loola dhaqmo sidii xaalad caafimaad oo deg deg ah oo u baahan daryeel caafimaad xoolaha. Waxaa looga hortegi karaa iyada oo la hubiyo in eeygaagu aanu dhakhso wax u cunin oo uu joojiyo jimicsiga isla marka ay cuntada cunaan.
Dhibaatooyinka caloosha ka sokow, noocani wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin wada jir ah. Hip dysplasia ayaa dhacda marka kala-goysyada miskaha ay kala furmayaan oo aysan is-waafajinayn.
Xaaladda ayaa aad ugu badan noocyada eyga waaweyn ee firfircoon. Waxay keentaa xanuun, dhaqdhaqaaqa oo daciifa waxayna u horseedi kartaa arthritis.
Calaamadaha waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaq la’aan iyo eygaaga oo diidan inuu socdo ama istaago. Qoobabkaaga ayaa xanaaqi kara ama ooyi kara xanuun wuxuuna ku jiidi karaa ama ku dhici karaa lugta xanuunsan. Xaaladda waxaa lagu daaweyn karaa qalliin laakiin sidoo kale waxaa lagu maareyn karaa daawo xanuunka iyo daaweynta jirka. Sida loo daweeyo xaaladda waxay kuxirantahay darnaanteeda.
Muddo intee le'eg ayuu Lab qolka Labku nool yahay?
Waa inaad ka filataa Isku-darka Lab Sheybaarka inuu noolaado 10-14 sano.
Pitbull Lab Mix waa mid aad u caqli badan oo aad loo tababaran karo.
Si kastaba ha noqotee tababbarkan noocani kuma joogsanayo eey-ka-go'an tahay in noocani yahay ballan-qaad ku saabsan tababarka nolosha oo dhan iyo is dhexgalka bulshada.
Afartaan lug lugeeye farxiya way faraxsantahay markaad faraxsantahay.
Samee wax walba oo aad awoodid si aad u noqotid hoggaamiyahaaga ugu fiican.
Qaado qaab adag laakiin cadaalad ah oo leh xoojin badan oo togan. Dhaqanka xun waa in la iska indhatiraa halkii laga dhiiri gelin lahaa ama la ansaxin lahaa.
Markii ardaygaagu wax saxo la socodsii waxa ay yihiin wiil ama gabar fiican. Ammaantaadu waxay noqon doontaa dhiirrigelintooda ugu weyn shaqo si fiican loo qabtay. Pitbull Lab Mix waa in la siiyaa waqti badan si uu ula kulmo saaxiibbada aadanaha iyo eygaba. Kaliya waxay jecel yihiin jardiinada eeyga waxayna aad ugu fiican yihiin xanaano-maalmeedka doggie sidoo kale.
Waxay rabaan inay mashquuliyaan jirkooda iyo maskaxdooda.
Waxaad siisaa qalab ay ku ciyaaraan iyo ciyaaro u baahan xoogaa maskax, oo ku mashquul caqabadaha xiisaha leh.
Qaado ciyaarta 'Retriever' ee uu jecel yahay oo ku dheji isboorti isboorti adoo u rogaya ciyaar qabasho.
Ciyaarta qabashada waxay tababbaraan eeygaaga si uu u raaco amarrada una ordo masaafo dheer. Waxaa lagu sameyn karaa kubad, ul ama Frisbee.
Intaad ciyaareyso waad tababaran kartaa oo ku tababbari kartaa amarrada sida tag, bood oo hoos u dhig.
Isku darkaani waa eey firfircoon oo ciyaar leh oo ku kobca agagaarka qoysaska mashquulka badan.
Mar dambe cidlo kuma noqon doontid saaxiibkaan xiisaha leh ee dhogorta leh ee ku ag jooga - Labrabull waa mid ka mid ah asxaabta ugu daacadsan ee aad weydiisan karto.
Si kastaba ha noqotee beddelkooda daacadnimadooda waxay u baahan doonaan in lagu mashquulo.
Kani waa eey isboorti oo u baahan kicin badan oo maskaxeed iyo mid jireed.
Haddii aad wax walba ku qabanayso saxankaaga markaa waxay kugu soo celin doonaan dhammaan jacaylka ay u hayaan.
Markaad korsato Pitbull Lab Mix guriga ma keentid xayawaan rabaayad ah - waxaad guriga u keeneysaa xubin cusub oo qoyskaaga ah!
Noo soo sheeg mid ka mid ah su'aalahaaga qaybta faallooyinka ee hoose ...
Macluumaadka Taranka ee Collie Dog
White Labradors ma yihiin kuwo nadiif ah iyo xaqiiqooyin kale oo aad u baahan tahay inaad ogaato
taariikhda pitbulls sanka buluuga ah
cananaaska waa u ok eyda
adhijir Jarmal madow iyo kareem
sida loo helo shaybaar qalin ah
Yeey Jarmal Shepherd isku darka eygaaga